Randrianomenjanahary Jean…: « Nanampy ahy hiala tao anaty fahasahiranana ny Tuc-Tuc » | NewsMada
Randrianomenjanahary Jean…: « Nanampy ahy hiala tao anaty fahasahiranana ny Tuc-Tuc »
Tao anatin’ny tsy fisiana asa, anisan’ny nisedra olana teo amin’ny famelomana ny vady aman-janany Randrianomenjanahary Jean, ny taona 2019. “Tsy nisy afa-tsy mari-pahaizana Bepc, niaina tany an-dRenivohitra aho taloha, saingy nisy olana tamin’ny asa dia namonjy an’i Toamasina”, hoy i Jean. Nitady hevitra hampidiram-bola, ny familiana ny tuc-tuc tao an-tampon-tanànan’i Toamasina no naharesy lahatra ny lehilahy. Nanomboka nahazo vola nentina nivelona, araka izany, izy. Nitombo vetivety monja anefa ny isan’ireo tanora tsy manana asa ka nanampy isa ireo mpanamory io fitaovam-pitanterana io. “Ireo afaka fanadinana toy ny Bacc na Bepc ka tsy manam-bola hanohizana fianarana dia lasa mitondra Tuc-Tuc”, hoy hatrany i Jean.
Maherin’ny arivo ny tuc-tuc miasa…
Niroborobo, araka izany, ny isan’ny Tuc-Tuc miasa ho an’ny ao an-tampon-tanànan’i Toamasina. “Lasa olana eo amin’ny fampidiram-bola amin’izao fotoana ny hamaroan’ny mpitatitra amin’io Tuc io satria efa misy arivo mahery izahay”, hoy i Jean. Samy mitady ny “versement” ho an’ny mpampiasa noho izany izy ireo ka ny sisa ambiny no entina mody. Manodidina ny 4000 ariary io volan’ny tompona Tuc io. “Arakaraka ny tsena, mety mahazo dimy arivo enti-mody indraindray na tsy maintsy mameno ny volan’ny tompona Tuc rehefa tsy misy ny asa”, hoy izy.
Maro ireo tsy manara-dalàna…
Mampitaraina fatratra ireo mpitondra Tuc-Tuc tahaka an’i Jean ao amin’ny renivohitr’i Toamasina kosa ny fisian’ireo mpamily tsy manara-dalàna. Anisan’izany ny tsy fananan’izy ireo ny taratasy fahazoana mitondra fiara na ny “permis de conduire”. “Miteraka tsy fifanajana eo anivon’ny fifamoivoizana sy mahafaty antoka ireo tena mivelona amin’ny asa io tranga iray io”, raha ny nambaran’i Jean.
Azo iainana, saingy tsy hatsanganan-javatra…
Roa taona nifotorana tamin’ny asa famoriana Tuc-Tuc, tsy mbola nahatsangana zavatra ho azy manokana i Jean, hatreto. “Lany atao sakafo ao trano sy ho an’ny zazakely ny vola isaky ny mody ka tsy hahazoana inon’inona” araka ny fanazavan’i Jean. Nambaran’ity mpanamory ity fa ny fananana ny Tuc-Tuc ho an’ny tena manokana ihany no vahaolana. “Tsy afaka ny hivelatra mihitsy ny mpitondra Tuc iray raha tsy azy ny fitaovam-pitaterana entiny”, hoy hatrany i Jean. Na teo aza ny soa azon’i Jean tamin’ny famoriana ny Tuc-tuc, mikiry hitady asa hahavelona azy hatrany ny lehilahy.